သဝန်တိုတာလား ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတာလား ? - For her Myanmar
သဝန်တိုတာလား ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတာလား ?
သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ အတိုင်းအတာတစ်ခုထိပဲ ကောင်းပါတယ်..
သဝန်တိုတယ်ဆိုတာ ငရုတ်သီးလိုပဲ။ အစားအသောက်စားတဲ့အခါ ငရုတ်သီးပူပူစပ်စပ်လေးပါမှ စားရတာ ပိုပြီးကောင်းသလိုပေါ့။ ချစ်ခြင်းတစ်ခုမှာလည်း အပြန်အလှန်သဝန်တိုတာလေးက ပိုပြီးအရသာရှိစေ၊ ပျော်ဖို့ကောင်းစေတယ်လေ။
ဒါပေမဲ့ ငရုပ်သီးအစားများရင် ဗိုက်နာတယ်၊ အစာအိမ်ရောဂါရစေတယ်။ ဒီလိုပါပဲ သဝန်တိုလွန်းအားကြီးပြန်တော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ရော အချစ်ရေးကိုပါ ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုလည်း သိတော့ သိပါတယ် ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ထိန်းချုပ်လို့မရဘူး ဆိုတဲ့သူတွေလည်း ရှိပြန်ရော။
ဒီတော့ ယောင်းတို့အနေနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်နော်။
ကိုယ့်ချစ်သူက တခြားကောင်မလေးကို စိုက်ကြည့်တဲ့အခါ သဝန်တိုစိတ်ဖြစ်တာ၊ ကိုယ်မဟုတ်တဲ့ တခြားကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ အရောဝင်တဲ့အခါမျိုးမှာ စိတ်မချတာမျိုးက သဝန်တိုခြင်း ပထမအဆင့်ပေ့ါနော်။
ဒါကတော့ လုံးဝကြည်နူးစရာပေါ့။ သဝန်တိုလို့ ကိုယ်ကသူ့ကိုစိတ်ကောက်မယ်၊ ရစ်မယ်၊ ပြဿနာရှာမယ်။ သူကကိုယ့်ကိုချော့မယ် ပြီးရင် ပြန်ချစ်သွားကြမယ်။ ဒီအချိန်လေးတွေက ပြန်တွေးတိုင်း ကြည်နူးရတဲ့ အဖိုးတန်အခိုက်အတန့်လေးတွေပါ။
Related article>>>အသက်(၃၀)ကျော် ဦးတို့ကို ချစ်မိနေတဲ့ ယောင်းတို့ သိကိုသိထားသင့်တဲ့အချက်(၄)ချက်
ဒီအဆင့်ကတော့ တော်တော်ပူလောင်လာပါပြီ။ သူ့ကို တွေ့သမျှကောင်မလေးတိုင်းနဲ့ စိတ်မချတော့တာ၊ တခြားကောင်မလေးတွေနဲ့ သာမန်စကားပြောတာလောက်ကို မလိုအပ်ဘဲ ဒေါသတကြီးပြဿနာရှာတာ၊ သူ့ရဲ့အပေါင်းအသင်းသူငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့ စကားပြောရင်ကို ပြဿနာရှာတာမျိုးဖြစ်လာပါပြီ။
စိတ်မချဖြစ်တိုင်း သူ့ကိုပြဿနာရှာတယ်၊ ရန်ဖြစ်ကြရတယ်၊ ဒေါသထွက်ကြရ၊ ငိုကြတဲ့အဆင့်အထိဖြစ်လာတယ်။ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ထက် စိတ်ညစ်စရာအချိန်တွေက ပိုများလာတာမျိုးပေါ့။
သူ့ကို စိတ်မချတာလား ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုမရှိတာလား
ဒီအခြေအနေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်ရအောင်နော်။ ဒီလို လူတိုင်းနဲ့သဝန်တိုနေတာက သူ့ကို စိတ်မချဖြစ်နေတာလား။ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်က ပတ်သက်သမျှ မိန်းမတိုင်းနဲ့ ဖောက်ပြန်နေတဲ့ စာရိတ္တပျက်ယွင်းသူဖြစ်နေပြီလား ? ဒါဆိုရင် သူ့ကို သဝန်တိုနေမှာထက် ဒီလိုလူမျိုးနဲ့ ရှေ့ဆက်လက်မတွဲသင့်တော့ပါဘူးနော်။
ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ကပဲ အစိုးရိမ်ကြီးနေတာလား ? ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့သံသယက ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူကို စော်ကားနေသလိုဖြစ်နေတာ ပြန်သုံးသပ်သင့်ပါတယ်နော်။ ဒီလို သံသယတွေများနေတာကလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုလျော့နည်းနေတာကြောင့်လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Related article>>>ချစ်သူနဲ့ ထာဝရပေါင်းဖက်လိုသူတိုင်း ကျော်ဖြတ်ရမယ့် အဆင့် (၃) ဆင့်
ကိုယ့်ရဲ့အလှအပ ကိုယ့်ရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ် ယုံကြည်မှုနည်းနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှုပြန်ရအောင် အားထုတ်ပါ။ ဒါဆို အချစ်ရေးမှာလည်း ပိုအဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်။
ယောင်းတို့ရေ … ပျော်စရာကောင်းတဲ့ ချစ်ခြင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့အတွက် သဝန်တိုခြင်းကို လိုအပ်သလောက်ပဲထုတ်သုံးကြပါ။ လိုတာထက်ပိုသုံးမိလို့ စိတ်ညစ်စရာတွေဖြစ်မလာပါစေနဲ့လို့ နောက်ဆုံးအသိပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
သဝနျတိုတယျဆိုတာ အတိုငျးအတာတဈခုထိပဲ ကောငျးပါတယျ..
သဝနျတိုတယျဆိုတာ ငရုတျသီးလိုပဲ။ အစားအသောကျစားတဲ့အခါ ငရုတျသီးပူပူစပျစပျလေးပါမှ စားရတာ ပိုပွီးကောငျးသလိုပေါ့။ ခဈြခွငျးတဈခုမှာလညျး အပွနျအလှနျသဝနျတိုတာလေးက ပိုပွီးအရသာရှိစေ၊ ပြျောဖို့ကောငျးစတေယျလေ။
ဒါပမေဲ့ ငရုပျသီးအစားမြားရငျ ဗိုကျနာတယျ၊ အစာအိမျရောဂါရစတေယျ။ ဒီလိုပါပဲ သဝနျတိုလှနျးအားကွီးပွနျတော့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျရော အခဈြရေးကိုပါ ထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကိုလညျး သိတော့ သိပါတယျ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျထိနျးခြုပျလို့မရဘူး ဆိုတဲ့သူတှလေညျး ရှိပွနျရော။
ဒီတော့ ယောငျးတို့အနနေဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ရအောငျနျော။
ကိုယျ့ခဈြသူက တခွားကောငျမလေးကို စိုကျကွညျ့တဲ့အခါ သဝနျတိုစိတျဖွဈတာ၊ ကိုယျမဟုတျတဲ့ တခွားကောငျမလေးတဈယောကျနဲ့ အရောဝငျတဲ့အခါမြိုးမှာ စိတျမခတြာမြိုးက သဝနျတိုခွငျး ပထမအဆငျ့ပေ့ါနျော။
ဒါကတော့ လုံးဝကွညျနူးစရာပေါ့။ သဝနျတိုလို့ ကိုယျကသူ့ကိုစိတျကောကျမယျ၊ ရဈမယျ၊ ပွဿနာရှာမယျ။ သူကကိုယျ့ကိုခြော့မယျ ပွီးရငျ ပွနျခဈြသှားကွမယျ။ ဒီအခြိနျလေးတှကေ ပွနျတှေးတိုငျး ကွညျနူးရတဲ့ အဖိုးတနျအခိုကျအတနျ့လေးတှပေါ။
Related article>>>အသကျ(၃၀)ကြျော ဦးတို့ကို ခဈြမိနတေဲ့ ယောငျးတို့ သိကိုသိထားသငျ့တဲ့အခကျြ(၄)ခကျြ
ဒီအဆငျ့ကတော့ တျောတျောပူလောငျလာပါပွီ။ သူ့ကို တှသေ့မြှကောငျမလေးတိုငျးနဲ့ စိတျမခတြော့တာ၊ တခွားကောငျမလေးတှနေဲ့ သာမနျစကားပွောတာလောကျကို မလိုအပျဘဲ ဒေါသတကွီးပွဿနာရှာတာ၊ သူ့ရဲ့အပေါငျးအသငျးသူငယျခငျြးတှေ၊ လုပျဖျောကိုငျဖကျတှနေဲ့ စကားပွောရငျကို ပွဿနာရှာတာမြိုးဖွဈလာပါပွီ။
စိတျမခဖြွဈတိုငျး သူ့ကိုပွဿနာရှာတယျ၊ ရနျဖွဈကွရတယျ၊ ဒေါသထှကျကွရ၊ ငိုကွတဲ့အဆငျ့အထိဖွဈလာတယျ။ ပြျောစရာကောငျးတဲ့အခြိနျထကျ စိတျညဈစရာအခြိနျတှကေ ပိုမြားလာတာမြိုးပေါ့။
သူ့ကို စိတျမခတြာလား ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုမရှိတာလား
ဒီအခွအေနမှော ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ပွနျဆနျးစဈကွညျ့ရအောငျနျော။ ဒီလို လူတိုငျးနဲ့သဝနျတိုနတောက သူ့ကို စိတျမခဖြွဈနတောလား။ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောက ပတျသကျသမြှ မိနျးမတိုငျးနဲ့ ဖောကျပွနျနတေဲ့ စာရိတ်တပကျြယှငျးသူဖွဈနပွေီလား ? ဒါဆိုရငျ သူ့ကို သဝနျတိုနမှောထကျ ဒီလိုလူမြိုးနဲ့ ရှဆေ့ကျလကျမတှဲသငျ့တော့ပါဘူးနျော။
ဒါမှမဟုတျ ကိုယျကပဲ အစိုးရိမျကွီးနတောလား ? ဒါဆိုရငျ ကိုယျ့ရဲ့သံသယက ကိုယျခဈြရတဲ့သူကို စျောကားနသေလိုဖွဈနတော ပွနျသုံးသပျသငျ့ပါတယျနျော။ ဒီလို သံသယတှမြေားနတောကလညျး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုလြော့နညျးနတောကွောငျ့လဲ ဖွဈနိုငျပါတယျ။
Related article>>>ခဈြသူနဲ့ ထာဝရပေါငျးဖကျလိုသူတိုငျး ကြျောဖွတျရမယျ့ အဆငျ့ (၃) ဆငျ့
ကိုယျ့ရဲ့အလှအပ ကိုယျ့ရဲ့ စှမျးဆောငျရညျအပျေါ ယုံကွညျမှုနညျးနတေယျဆိုရငျ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှုပွနျရအောငျ အားထုတျပါ။ ဒါဆို အခဈြရေးမှာလညျး ပိုအဆငျပွလောပါလိမျ့မယျ။
ယောငျးတို့ရေ … ပြျောစရာကောငျးတဲ့ ခဈြခွငျးတဈခုတညျဆောကျဖို့အတှကျ သဝနျတိုခွငျးကို လိုအပျသလောကျပဲထုတျသုံးကွပါ။ လိုတာထကျပိုသုံးမိလို့ စိတျညဈစရာတှဖွေဈမလာပါစနေဲ့လို့ နောကျဆုံးအသိပေးလိုကျပါတယျနျော။
Tags: Believe, Boyfriend, Happy, Jealous, love, problem, Relationship
Sugar Cane April 1, 2019